मेराे मानवअधिकार खाेईं ?- किरण विष्ट – Puleso
मेराे मानवअधिकार खाेईं ?- किरण विष्ट
सो घटनामा उनका छोरो किरणराज विष्टको पनि संलग्नता रहेको आरोप लाग्यो । आन्दोलनले उनको डिएनए परिक्षण गर्न दबाब दियो । र, परिक्षण पनि भयो । सो परिक्षणले निर्माला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुनुमा उनको संलग्नता नभएको देखायो । उनी भन्छन तत्कालिन कंचनपुर प्रहरी प्रमुखको छोरा हुनु मात्रै मेरो दोष हो ? होईन भने मेरो मानवअधिकार खोई ? मेरो बिषयमा फेसबुक तथा सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही हुदैन रु कतिपय अनलाईन तथा सामाजिक संजालले मलाई बलात्कारी र हत्यारा नै प्रमाणित गरेको छ । उनिहरूलाई कारवाही खोई रु
निर्मला पन्तको हत्यापछि न्यायका लागि चलेको आन्दोलनले उनलाई पनि दोशी देखायो । तर, परिक्षणले उनलाई दोशी देखाएको छैन । अहिले उनी आफुँ अन्यायमा परेको बताउँदै आएका छन् । उनले सो घटनामा कुनै पनि हातमा संलग्नता नरहेको बताए । तर, पछिल्ला केही समयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफुप्रति आएका समाचारले दुःखी बनाएको बताउँछन् ।
निर्मला पन्तको हत्यापछि मेरो संलग्नता छ भनियो । बबिता बम दिदीबहिनीसँग मेरो चिनजान भएको हल्ला फिजाइयो । तर, मैले न निर्मला पन्तलाई चिनेको थिएँ न पहिले मैले मेयरका भतिजा आयुश बिष्टलाई चिनेको थिएँ । आयुसलाई त मैले डिएनए टेष्टका लागि काठमाडौं ल्याउने बेला प्लेनमा भेट भयो । र अर्कोपटक भनेको डिएनए टेष्ट गर्ने दिन मात्रै भेटेको हुँ ।
मलगायत मेरो परिवार र उक्त दिनमा मसँग कार्यक्रममा सहभागी रहेका व्यक्तिहरु कसैसँग पनि सोधपुछ तथा नबुझी नै एक पक्षीय रुपमा आयोग र उच्चस्तरीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएछ । के यसमा यसमा मेरो मानव अधिकारको किन अटाएन रु यसले के मेरो मानव अधिकारको हनन् भएको छैन र रु
म जस्तो एउटा निर्दोष नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाउने अधिकार यो देशमा छ भने मलाई अनाहकमा सामाजिक संजालबाट यस्तो मानसिक यातना किन रु निर्मला पन्तको विषयमा समाचारको आधिकारिकता पुष्टि नगरी विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशन र प्रसारण भइरहेका छन् । यसले म र मेरो चरित्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ । यसमा म धेरै दुःखित बनेको छु ।
यदि सो घटनामा मेरो कुनै प्रकारको संलग्नता देखिए म जस्तासुकै कारवाही भोग्न पनि तयार छु । तर, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेका समाचारहरुले मेरो मानमर्दन भएको छ । अतः म पनि नेपाली नागरिक भएको र नेपाली नागरिक भएको नाताले मैले पाउने मानवअधिकार कै हनन् भइरहेको छ । मलाई आशा छ कि म निर्दोश हुँदा हुँदै जुन किसिमले पीडा पाइरहेको छु, पक्कै पनि मैले बिर्सने त छैन ।